कुन बैंकमा पाइन्छ सस्तो ब्याजमा ऋण ? बैंक/बीमा, उपभाेक्तामंगलबार, माघ २९, २०७५
एन आई सी को बिशेष छुट अफर सो सुविधा अन्तर्गत एन आई सी एशियाको डिम्याट खातामा २२ फागुन देखि ६ चैतसम्म पूर्ण रुपमा निशुल्क गरिएको बैकले जनाएको छ । बैंक/बीमाबुधबार, फागुन २२, २०७५
बैंकका पूर्व सीईओः अध्यात्मदेखि अभियोगसम्म तलब तथा सुविधा धेरै हुने भएकोले सरकारी अधिकारी पनि बैंकका सिइओको तलबभत्ताको बारेमा बेलाबेलमा चासो दिन्छन् । तर, सिइओको जिम्मेवारीबाट हटेपछि उनीहरुले के गरिरहेका छन् ? चासोको बिषय हुन सक्छ । बैंक/बीमा, समाजबिहिबार, फागुन २३, २०७५
नयाँ वर्षमा मुक्तिनाथको नयाँ योजना मुक्तिनाथ स्मार्ट बैंकिङ्ग एपबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा रिचार्ज गर्दा १० प्रशितत र एनसेलमा रिचार्ज गर्दा ५ प्रतिशतसम्मको टपअप बोनस सुविधा दिनेछ । बैंक/बीमासोमबार, वैशाख २, २०७६
बैंकबाट तीन महिनामा हराएकै हो साढे २४ अर्ब ? कहाँ गयो पैसा ? पुस मसान्तको जस्तै बैंकहरुले निक्षेप देखाएको भए चैत मसान्तमा उनीहरुसँग २७ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको देखिन्थ्यो । तर, यसमध्ये बैंकहरुसँग १ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप भएकोले बैंकहरुले सो रकम घटाएर २६ खर्ब ३० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै देखाएका हुन् । बैंक/बीमाबिहिबार, जेठ २, २०७६
सरकारी ठेक्कामा वाणिज्य बैंकको जमानत एकाधिकार तोडियो सरकारले गत ३० वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको जमानत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थासँगै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई बैंक जमानत दिने बाटो खुलेको हो । बैंक/बीमाबुधबार, जेठ ८, २०७६
बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी कल डिपोजिट लिन नपाउने नयाँ व्यवस्था अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपको १० प्रतिशतसम्म कल डिपोजिट लिन पाउने छन् । यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै कल डिपोजिट लिन पाउने छन् । बैंक/बीमाबिहिबार, जेठ ९, २०७६
घरजग्गा किन्न कुन बैंकले कति ब्याजमा दिन्छन् ऋण ? सबैभन्दा सस्तो ब्याज राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । सबैभन्दा महँगो ब्याज कुमारी बैंकको देखिएको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको बेस रेट र उनीहरुले प्रकाशित गरेको ब्याज दरअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८.३८ प्रतिशतसम्म र कुमारी बैंकको १९.०४ प्रतिशतसम्म ब्याज पर्ने देखिएको छ बैंक/बीमाआईतबार, असार १, २०७६